Cervelo R5 ọ dị mma maka ịrịgo? - Mmega
Isi > Mmega > Cervelo r5 etiti ibu - nkọwa zuru ezu
Cervelo R5 ọ dị mma maka ịrịgo?
Na ojiji, ha na-eche ngwa ngwa. Ha na-enwekwa nkwesi ike, na-enye onyinye nke aR5Ghọta na ị na-enwe mmetụta dị egwu ma dị njikere mgbe ị na-atụgharị ya site na bends. Ha kwuru 1,695g arọ bụ ihe ezi uche na-ezughị iji jide gị azụ nanrịgo, ma e nwere wiil ndị dị mfe n'ahịa.08.27.2018
Cervélo weputara nsụgharị kachasị ọhụrụ nke R-Series ha niile na-egosipụta ụdị R5 na R3 ọhụụ na nsụgharị rim na diski breeki. Ha dị ezigbo mma ma kpọọ anyị òkù ka anyị gaa akụkụ na-ekpo ọkụ, anwụ na-acha na nke mara mma nke totali ka anyị nwee ike ileba anya na ọgba tum tum ahụ. (obi ụtọ, egwu siri ike) Ma mgbe m kwuru mmeri ihe niile, nke ahụ abụghị ikwubiga okwu ókè.
Emepụtara usoro R ka ndị na-ege ntị na-enweghị atụ na 2005. Ihe kpatara nke a bụ na oche ahụ na-adị ka ọ dị gịrịgịrị na ọ gaghị enwe ike zuru oke. Ya mere Cervélo gara ma nye Fabian Cancellaraw, onye hapụrụ ma eleghị anya merie Paris-Roubaix na ohere mbụ enwere.
Stuart O'Grady sochiri mmeri ya ozugbo, mgbe ahụ Carlos Sastreus meriri Tour de France. Na a résumé dị ka nke a na-agafe n'akụkụ abụọ kachasị oke nke kalenda ọkachamara ịgba ọsọ. Ma ugbu a na oge ebe igwe kwụ otu ebe na-aghọwanye ọrụ a kapịrị ọnụ, gịnị ka ị na-eme mgbe? You chọrọ iru igwe ọhụrụ R-usoro igwe kwụ otu ebe? Ọfọn ị mee ka ọ sie ike.
Onye isi injinia Cervélo maka ọrụ a, onye bụ onye na-anụ ọkụ ọkụ n'onwe ya, gwara m ihu na ihu na nke a bụ n'ezie igwe kwụsi ike Cervélo rụtụrụla. Mana dịka nke ahụ dị mkpa dịka nke ahụ, ha lekwasịrị anya na nkasi obi, ịdị mma na njikwa. (upbeate energetic music) Ka anyị kwuo maka njikwa, nri? Ọ bụ otu n’ime akụkụ kachasị mkpa nke igwe kwụ otu ebe, mana ọ na - esikwa ike ijigide ya.
Ka o sina dị, Cervélo gawara imezi geometry nke ọgba tum tum ha. N'ihi ya, ọ bụghị dị ka keesemokwu dị ka ndị aerodynamic S-usoro, ma ọ bụ dị ka nọrọ jụụ dị ka do-ya-niile C-usoro. N'okwu ha, ha chọrọ ịmaliteghachi ịgba ọsọ ịgba ọsọ oge ochie, nke bụ nkwupụta nkwuwa okwu mara mma na agba ịnyịnya ígwè nke Italytali.
Maka nke a, ejiri nwayọ rụọ akụkụ ụfọdụ dị mkpa nke jiometrị. Ya mere ejiri mee ka ihe nkwado dị ala nwee ọtụtụ milimita. N'ihi ya, igwe kwụ otu ebe na-eche na ọ na-adịwanye jụụ ma gbanwee ya na igwe igwe.
Tụkwasị na nke ahụ, a gbatịrị akụkụ ihu ihu ihu n'ihu site na millimita ole na ole ma mee ka akụkụ ihu ụzọ dị jụụ site na ọkara ogo. Nke a na-eme ka njikwa dị mma ma nwee ahụ iru ala ma na-agbatịkwu ogologo, ya bụ, wiilị nke igwe kwụ otu ebe.
Ma mgbe ahụ, ị ​​ga-edozi ya na ihe dị n'azụ igwe kwụ otu ebe. Ha mere ogologo usoro ndị ahụ site na milimita ise. Nsonaazụ ya bụ na Cervélo kwuru na nke a bụ igwe kwụ otu ebe iji nwee ahụ iru ala kama ịnọ na ya, ọ bụ ezie na nke ahụ anaghị achọ itinye uche gị niile iji mee ka ọ kwụ ọtọ, ọ na-akwụghachi gị ụgwọ ịnwe ya.
Ma mgbe ahụ, ọ bụrụ na m ga - enweta obere geeky ebe a, otu ihe dị jụụ banyere usoro ihe a na - eme bụ na ha nwere ike idobe geometry n'etiti rim na ụdị breeki diski ahụ dabara nke ọma, n'ihi na ị ga - ejikarị diski breeki ị ga - achọ ogologo oge ogologo ogologo karịa. kwụ n'ahịrị jide. Yabụ ebe a anyị jisiri ike debe ha otu. (energet ic techno music) Na mgbakwunye na geometry, akụkụ ọzọ dị ukwuu nke nnukwu igwe kwụ otu ebe bụ nkwesi olu ike, ọkachasị nkwesi ike zuru oke nke wiil ahụ dum, n'ihi na igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe na-agagharị ma ọ bụ na-esote n'akụkụ, ọkachasị ebe ụzọ nwere. gbajiri agbaji ihu ụkwụ gị na-anọghị n'ịntanetị.
Ya mere, igwe kwụ otu ebe a na-ekwe nkwa ọnụọgụ mara mma. Igwe na-aga n'ihu, ọkpọ isi, bụ 21% stiffer karịa nke gara aga. Mpempe akwụkwọ nkwado 13% na ụdị diski na-abawanye ọnụ ọgụgụ ndị a karịa iji jiri mmetụta nke axles iji mee ka wiil ndị ahụ.
ụgbọ ala na-akụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè
Tụkwasị na nke a, ha ebutewokwa oke dị elu nke eriri carbon dị elu na ụdị R5 a, mgbe ahụkwa, e nwere nchikota nke ụdị tube a nụchara anụcha na ịtọgbọ carbon. Ọ dị mfe ịkọwapụta nnukwu mgbidi dị ebe a. Ya mere udi Squoval a ma ama nke Cervélo na o buru ibu dika ha nwere ike ime ya mgbe ha na-agbaso iwu UCI Nha nke tube ahụ dị mkpa, ọ bụ ezie na ọ na-erite uru nke ihe onwunwe nke carbon na-eme ka ọ sie ike.
Ya mere, ha na-etinye ihe ka ọtụtụ n'ime ihe dị n'akụkụ nke ọkpọ ahụ ebe a na-etinye ya n'ụzọ kachasị mma megide ntụgharị torsional, wee debe ihe ndị ahụ n'etiti dị ka mkpa ma ya mere dị ka ọkụ dị ka o kwere mee. O doro anya na naanị na ebe ụfọdụ ọ bụghị 0,2 millimeters oke. (egwu siri ike) Ugbu a na-achọ nnukwu stiif etiti, olee otu ị ga - esi mee ka nkasi obi dịkwuo mma? Ọfọn, akụkụ ọkpọkọ ndị a nwere ike ị kachasị mfe ma ọ bụ kachasị.
Ma ihe kasị dị irè mgbe bụ na taya gị. Maka nke a, Cervélo emeela ka nwepu taya. Ọchịchị bụ 28 millimeters.
Nke ahụ pụtara na ọ ruru n'ụkpụrụ mba ụwa, yana nhichapụ 4mm n'akụkụ niile nke taya ahụ, na ụwa n'ezie ọ ga-abụ na m ga-enwe obi ụtọ ịrapara 30, ma eleghị anya ọbụna taya 32mm na ya. Mgbe ahụ, n'ụzọ na-akpali mmasị, Cervélo na-agwakwa anyị na enwere ezigbo ọdịiche dị n'etiti mmetụta nke R5 na R3. R5 siri ike nke ukwuu n'ihi oke dị elu nke eriri akwa-modulus.
R3, n'aka nke ọzọ, nwere mmetụta dịkarịsịrị ike karị, nke ahụ bụ n'ihi obere tuber. (Energetic music) Ka anyị kwuo maka dabara? Ndị na-emepụta ịnyịnya ígwè nwere ole siri ike anyị nwere obi ụtọ na, ụfọdụ n'ime anyị dị ka ogologo, ala, ogologo ọnọdụ. Ebe ndi ozo choro okwa di nkenke ma di elu.
O nweghi azịza ziri ezi ma ọ bụ nke na-ezighi ezi. Ihe niile dabere na nhọrọ onwe onye. N'ebe dum Cervélo dị, ị nwere usoro S nke na-eme ihe ike, ọ na-enye ọfụma.
Na mgbe ahụ anyị nwere na nsọtụ ọzọ nke ụdịdị dị iche iche, anyị nwere C-usoro, nke nwere ọtụtụ izu ike karị, na igwe kwụ otu ebe R ndị a dabara n'etiti ha abụọ, mana ha dị iche. R3 na R5 nwere ihe dị iche. N'ime ha abụọ, R5 bụ racy.
Mee ka ndị ọkwọ ụgbọala na-enwe obi ụtọ na Dimension Data. Ya mere, ejirila milimita asatọ wedata nchịkọta ahụ. Nke ahụ bụ ihe dị iche na etiti etiti nkwado dị ebe a na elu nke isi ọkpọkọ.
abụba taya na-abụba
Otú ọ dị, ihe kwesịrị ekwesị bụ otu ihe ahụ na R3, ọ bụ ezie na ọ naghị ele ya anya na ọ bụ n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị gụnyere onwe m enweghị ike ịnya ụgbọ elu dị ala. Ma ee, anyị ka chọrọ igwe kwụ otu ebe nke mara mma na Cervélo maara nke ahụ, ya mere ha mere mgbanwe ole na ole na igwe kwụ otu ebe, dịka ịwelite okpueze ndụdụ ahụ, nke na-enye echiche nke igwe kwụ otu ebe nwere ọtụtụ ọkwa mara mma. Ihe ọzọ dị mma banyere ịpịpụta ndụdụ a bụ na ọ na-enye ha ohere ịmepụta njikọ dị nro dị n'etiti okpueze ndụdụ na ọdụ ụgbọ mmiri, nke pụtara na eriri carbon dị ọtụtụ. pụtara na ọ siri ike ma na ha nwere ike ịba ụba karịa akụ na ụba, na - ebute ndụdụ ọkụ. (egwu siri ike) Ọfọn, dịka e kwuru na mbụ, ibu nke R3 agbadaala nke ukwuu site na 10% maka ụdị breeki rim na 16% maka ụdị diski ahụ.
Mana nke na-adọrọ mmasị, Cervélo mere ka ibu ahụ yọọ nke R5, nke ahụ bụ n'ihi na, nke mbụ, ha nwere obi ụtọ na ọnọdụ ahụ, mana n'ihi na ha chere na ibu dị arọ ga-emebi sturdiness ahụ. Ya mere, elebara anya na nkwesi ike kama. Ugbu a, n'ezie, anyị enweghị ike ikwu maka ikuku, nke a bụ 2017 emesia.
Emeghị igwe kwụ otu ebe a maka aerodynamics, mana Cervélo ka tinye ụfọdụ echiche na mbọ iji mee ka ọ dị watts anọ karịa nke mbụ, mgbe ọ na-anwale kilomita 30 kwa elekere. Ma R3 bukwara watts abụọ rụọ ọrụ nke ọma karịa onye bu ya ụzọ. Ọtụtụ n'ime nke ahụ sitere n'aka ndị na-arụ ọrụ na carbon na-adọrọ adọrọ.
Ọ bụ n'ezie ihe eji ejizi aluminum na azuokokoosisi, nke na-atọ ụtọ, nke mbụ Cervélo batara na ihe a. (egwu siri ike) Ugbu a nke ahụ bụ anya mbụ gị, ọ bụghị anya azụ, lelee Cervélo R-Series ọhụrụ. Ahịa amalite na 3,700 ma ọ bụ 3,500 euro maka R3 wee gaa 9,500 ma ọ bụ 9,000 euro maka R5 na Di2 ma ọ bụ SRAM RED eTap HRD denye aha na GCN.
Ọ bụ kpam kpam free. Naanị ịpị ọkụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwekwuo ọdịnaya, m na-agwa onye ọ bụla banyere onye ọrụ ibe Cervélo Team Dimension Data ma ị nwere ike ịmịcha ụgbọ ala ha site na ịpị ebe ahụ, ma ọ bụ maka ịmatakwu ihe ọmụma banyere jiometrị igwe kwụ otu ebe. gbalịa ịkọwa ihe ndị bụ isi. Ọ dị ebe ahụ
Biknya igwe Cervelo ọ dị mma?
Cervelobụ otu n'ime ihe ndị kasị prestigious ụdị na ịgba ígwè, na ya nso nke R-usoro ụzọanyịnya igwe, S-usoro aero-okporo ụzọanyịnya igwena P-usoro triathlonanyịnya igweihe niile eji na ọkwa kachasị elu na ịgba ígwè ọkachamara na triathlon.
(Obi ụtọ dị egwu) - - maara ihe dị mma banyere igwe kwụ otu ebe a na ọ bụghị ọtụtụ mmadụ nwere ya, yabụ ndị mmadụ na-achọ inyocha ya oge niile, ọkachasị mgbe ị banyere n'ụlọ ahịa kọfị. Chere obere oge, onye bụ onye ahụ? - Hey Mark - Anyị na Susie Cheetham's Cervelo P5X nọ ebe a. Ugbu a, Susie agwụchaala nke isii na 2015 Iron Man World Championship na ọ bụ ugbu a bụ otu n'ime ihe kacha mma ntachi obi na egwuregwu atọ n'ụwa.
Ya mere, ka anyị leba anya na ntọala ha ka anyị wee nwee ike ịmalite site na akụkụ kachasị pụta ìhè, etiti ahụ, nke a bụ usoro nhazi osisi nke pụtara na ọ nweghị oche oche. Nke a bụ isi na-eje ozi iji mee ka ikuku ikuku dị gburugburu etiti na azụ azụ, nke a na -emepụta obere ịdọrọ. Na ịga n'ihu otu nzọụkwụ, ha gbalịrị itinye nchekwa ahụ n'ụzọ zuru ezu.
Ya mere, anyị nwere nchekwa ebe a, ebe a, na ebe a. Yabụ maka ihe dịka akụkụ ahụ ma ọ bụ ihe ndị ị na-achọghị ịbanye maka njem a, ịnwere ike ịtọpụ ya na ngalaba abụọ a ebe ha anaghị eru ọtụtụ ụzọ. Mgbe ahụ, anyị na-atụ egwu n'elu ọkpọkọ, nke a pụtara maka ihe dịka nri na gels, yana oghere dị mma, dị mfe ịnweta na akpa akpa.
Ma ọ bụ ezie na ọ dị ka igwe mgbagwoju anya dị mgbagwoju anya, ọ bụ n'ezie enwere ike idozi. Site na ịtọghe ihe nkedo ebe a ị nwere ike ịgbanwe elu nke okpukpu atọ na pad. Ma ị nwedịrị ike ịmegharị mpempe akwụkwọ ahụ ma ọ bụ pụọ, ma ọ bụ tụgharịa ihe niile iji mee ka mpempe akwụkwọ dị nso iji banye n'ọnọdụ aerodynamic kachasị mma.
Cervelo hapụrụ. Okwute anaghị akwatu ebe a. N'ihi na mgbe ọ na-abịa njem a igwe kwụ otu ebe, na isi mmanya n'ezie gbawara ọkara na-eme ka mbukota a obere mfe.
Na na Kwadobe, o nwere Shimano Dura Ace DI2. Dịkwa ka ọ dị n'ọtụtụ igwe igwe TT, taa ọ nwere nhọrọ n'etiti mgbanwe mgbanwe na njikwa TT na mpi anọ. Ka anyị kwuo na ọ ga-achọ ịgbanwe mgbatị mgbe ị na-agbagharị, na-akwọ ụgbọala ma ọ bụ na-arị ugwu, dịka ọmụmaatụ, ka nwere ike ịme ya na-enweghị ịdabere na njedebe nke njikwa ahụ.
Ọ na-arụ ọrụ Shimano Dura Ace D I2 9071 ihu na azụ wheel wheel, ya na otu Simano Dura Ace 11/28 cassette. Na na crankset, o nwere Rotor 2inpower Power Meter, nke bu onodu uzo ike abuo, na ya o nwere Rotor Q Ringsand onye guzobere 54/42, ma na njedebe nke cranks, o nwere Aero Lee Keo Blade -Pedals. Na njedebe nke otu a, ị nwere ike ịchọpụta na ọ na-agba ọsọ ọsọ seramiiki, wiilị ọzụzụ OSPW.
Na mgbe ahụ, na agbụrụ ụbọchị, ọ swaps yinye maka seramiiki ọsọ UFO yinye. Ugbu a maka igwe kwụ otu ebe: Susie na-agba Hed kemgbe mmalite nke ọrụ triathlon ya, ọbụlagodi tupu ha akwado ya. Na ebe a o nwere Hed Jet 6 n'ihu na Hed Jet 9 na azụ, ọ na-enwekwa akwụkwọ mmado aha ya bụ Susie Cheetham na Ironman Championship '17, ndị a bụ wiil-disk-brek kpọmkwem maka P5X na ha n'ezie eme n'ibu TRPhigh ụzọ diski brek jiri ISM PS 1.1 sadulu, a gbawara n'etiti-imi sadulu na-akpali gị n'ihu na-aga n'ihu na tilt gị hips n'ime ihe aerodynamic ọnọdụ.
Amaara m na Susie na-arụ ọrụ n’ọkwa ya ọtụtụ oge n’oge na-adịghị anya ma ị nwere ike ịhụ na n’ihu ya na ntọala ya na mpempe akwụkwọ ya wee jiri nkedo ahụ na-enweghị ntụpọ na mpe mpe akwa iji mee ka ikpere aka ya dị jụụ ma nwee ahụ iru ala. Ugbu a, wiil ndị a na-arụzi taya 25MM Continental Grand Prix 4000, mana anyị maara na na agbụrụ ụbọchị Susie ga-agbanwe ndị na-adabere na 25MM Continental Grand Prix TT taya. Na ịgbakwunye ụfọdụ n'ime ihe ndị na-emecha, o nwere Wahoo Element Bolt kọmputa kọmpụta n'ihu karama Xlab Torpedo Aero ya na ahịhịa ka o wee nwee ike ịnọ n'ọnọdụ mgbe ọ na-a drinksụ mmanya n'ụgbọ mmiri, wee nwee karama n'azụ nke ahụ Sadulu.
Ya mere oji tinye ha ngị na ngwongwo kalama Xlab. Ya mere, nke a bụ Susie Cheetham's Cervelo P5X, ma ọ bụrụ na ịchọrọ igwe kwụ otu ebe a, nye ya mkpịsị aka. Na iji hụ isiokwu ndị ọzọ dị ka nke a, pịa pịa gburugburu ụwa iji denye aha na GTN wee hụ TT anyị na ọgba tum tum na isiokwu nkwalite nke m na-agbago na P5X, pịa ebe a n'elu, yana maka ndụmọdụ ntụgharị T1 anyị iji hụ site na elites dị nnọọ pịa ebe a n'okpuru.
Kedu ihe dị iche na Cervelo R3 na R5?
Isiihe dị icheụghan'imecarbon layup, nke bu, dikaDebe ya, emepụtara ka ọ dị mma karịaR5, na-ehichapụkwu okporo ụzọ na-enweghị ịhapụ isi ike. Nke ọzọ buru ibuọdịiche dị n'etitiabụọ anyịnya igwe bụ naR3adịghị nyefe ihe ka ukwuu nke okporo ụzọ site n'aka onye na-agba yaR5na-eme.Eprel 30 2019
Gịnị kpatara igwe kwụ otu ebe Cervelo ji dị oke ọnụ?
Ajụjụ a bụ n'ihi: - Ha bụ 'ọhụụ', ọ bụghị dịka ụfọdụ ụdị ịtali nke nwere nke 'ochie' ahụ bara uru dịka colnago, fuji ma ọ bụ bianchi. - Ha enweghi oke podiums na agbụrụ di nma nke oma dika TDF dika imaatu pinarello.Jul 20 Dec 2019
Nnukwu ihe dị iche n’agbata ịnyịnya ígwè na ịgba ịnyịnya ígwè bụ n’ezie njedebe ihu. (whoosh) Ọ bụ ihe dị ka ogo 90 na igwe kwụ otu ebe. (whoosh) (egwu siri ike) (whoosh) Ndewo, Traniacs dị nso na Alter Ego Sports, ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe kachasị amasị gị, ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe kachasị amasị m, onye ọ bụla nọ na Winnipeg ọkacha mmasị igwe kwụ otu ebe.
Enyi anyị James n’ebe ahụ na Alter Ego nwere ụfọdụ igwe ọhụrụ na-ekpo ọkụ ọ wuru. Ọ nwere ọtụtụ ọnụ ụzọ, ọ nwere igwe ịgba ọsọ. Ihe anyị ga - eme bụ, echere m na m ga - agbanye ha n’akụkụ, n’ihu na azụ, azụ na azụ, ihu elu, elu aka nri, akụkụ elu, anyị ga - egosi gị ihe dị iche na n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe. N'ebe a, anyị nwere Cervelo S5 nke afọ dị ugbu a na breeki breeki.
Mgbe ahụ laghachi ebe a, ee, achọrọ m ịsị na ọ bụ Cervelo P3 nke afọ dị ugbu a, ụdị ọhụụ nke igwe kwụ m. Ugbu a igwe kwụ otu ebe abụọ a dị ezigbo nso otu ụdị ahụ na usoro nke ntule, etiti na ọnụahịa, ewezuga triathlon, n'okporo ámá. Ọtụtụ mmadụ na-abịa triathlon, ha nwere ndabere igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe.
Ọ bụghị ọtụtụ mmadụ nwere igwe kwụ otu ebe. Yabụ echiche bụ olee otu ha ga-esi nweta igwe kwụ otu ebe a nke ha nwere maka triathlon? You na-eme ya? Kpamkpam. Tụfuo ogwe osisi abụọ, ị ga-enweta onwe gị n'ọnọdụ mara mma ma ị nwere ike nweta afọ mbụ gị na triathlon na naanị otu ụzọ igwe kwụ otu ebe, n'agbanyeghị ụdị igwe ịnwe. itinye ego Iji mee nke a, ọ bụ ezi echiche ịzụrụ igwe kwụ otu ebe na triathlon n'ihi na ọ ka mma nke ọma na ị nwere ike ịga ije nke ọma karịa igwe kwụ otu ebe.
Ka anyị rute na nke ahụ. The nnukwu ihe dị iche n'etiti a ọduọ igwe kwụ otu ebe na a tri-igwe kwụ otu ebe bụ n'ezie n'ihu wheel. Na igwe ịgba ọsọ, ịnwe brek, ndị na - ebugharị gia, ha niile nọ ebe mkpuchi ebe ị ga - arụ ọrụ ha n’emeghị aka gị.
Nwere ike ịchọrọ ịga tụlee, mana ọbụlagodi site na tụlee ị nwere ike ịkwụsị. Ọ dị ọtụtụ, ọ ga-adị nchebe karịa ịnyagharị na mkpọ ebe ndị mmadụ dị sentimita asatọ n'ihu gị na n'akụkụ gị. Kwesịrị inwe ike ịgagharị na ijikwa (snaps) the bike in a jiffy.
On a tri igwe kwụ otu ebe, ị naanị nwere mgbanwe levers mgbe ị na-na na ala na aero ọnọdụ. Ikwesiri itinye aka gị na ezumike iji laghachi na azụ. Ihe mere nke ahụ ji dị mma na igwe kwụ otu ebe bụ n'ihi ndị nọ n'ihu gị, ha na-aga ogologo ụgbọ ala.
Ọ pụtakwara na igwe kwụ otu ebe anaghị adịcha mma maka ịgba otu. Yabụ ọ bụrụ n'ịmụnyere ọtụtụ ndị na-anya n'okporo ụzọ dịka ọmụmaatụ, enwere ezigbo ohere na ha agaghị etinye gị na ngwongwo ahụ na igwe kwụ otu ebe n'ihi na ọ gaghị adị mfe ma dịkwa gara gara dịka igwe kwụ otu ebe a. Ihe ndị aeroba aka na-enye gị ga-enyere gị aka ịmịnye ihu nke ahụ gị mma.
Ọgwụgwụ nke a triathlon igwe kwụ otu ebe bụ na-abụkarị ihe kemeghi karịa n'ihu njedebe nke a ọduọ igwe kwụ otu ebe. Can nwere ike ịbanye ma pụọ. Nwere ike gbagoo ma ị nwere ike ịhazigharị akụkụ aka ya; mgbe ị na-eke eriri igwe aka n'okporo ụzọ, ị nweghị nhọrọ mgbanwe ndị a niile nke ga - enyere gị aka ịnweta ọnọdụ ị ga - anọ ruo ọtụtụ awa.
Nke a dị ezigbo mkpa n ’ihi na ihe dị ka pasenti 80 nke ikuku a na-eme ka oke gị gaa n’ihu bụ ahụ gị. Ka ị na-anọ n'ọnọdụ aero, ngwa ngwa ị ga - adị. Egwuregwu igwe kwụ otu ebe ga - enwekarị ihe nwere mgbawa imi n’ihi na ị na - adabere n’ihu n’akụkụ hip gị dị iche.
Okporo ụzọ ịnyịnya ígwè na-adịkarị larịị. Chọghi n’ezie iji ihe eji agba-agba imi n’elu igwe ịgba ọsọ. Ihe mejupụtara ya, cranks, ihe nkedo ya, nkedo ahụ n'onwe ya, brekị, ha niile bụ otu, site na Tribike na igwe ịgba ọsọ.
Enweghị ọdịiche. Dị nnọọ ka wiilị na etiti ahụ. Ebe ihe na-amalite na-dị nnọọ iche a tri-igwe kwụ otu ebe na a ọduọ igwe kwụ otu ebe dị na jiometrị.
Ezubere igwe kwụ otu ebe ka ị dịrị n’iru n’ihu, ụkwụ gị agaa ihu karịa, yabụ, akụkụ ikpere gị ga-emepe. Na a ọgba tum tum, na aka nke ọzọ, ị bụ nnọọ ihe ziri ezi. Yabụ ị ga - ahụ na oche oche na oche nke Tribike na-aga n'ihu n'ihu, n'elu nkwado ala.
Ọ bụ ezie na igwe kwụ otu ebe na-aga n'ihu n'ihi na ị kwụ ọtọ karịa. I nwekwara ike ịhụ na tri-igwe kwụ otu ebe na-abịa ihu ọma na ala. Ọ bụ ezie na ịgba ịnyịnya ígwè na-abịa obere ntakịrị ma na-eburu gị n'ihu.
Ezigbo enyi m James ebe a na Alter Ego na-eji nke a iji gosi ọdịiche dị n'etiti eriri igwe. Ọ bụ ihe dị ka ogo 90 na Tribike. Ọ dị ka ogo 80 na igwe ịgba ọsọ.
N'ihi gịnị? N’okporo ígwè atọ, ịchọrọ ka hips ndị ahụ mepee emepe karịa ka nke ahụ na-ebelata ọ yourụ gị na akwara ụkwụ ka ị wee nwee ike ịdị ọhụrụ karịa na igwe kwụ otu ebe. Mgbe ị na-eme ihe ike na aero? Igwe kwụ otu ebe, ma ịmalitere na-eche echiche miri emi, ị ga-anwa iji ikuku na ọnụ ụzọ m. Ọ ga - eme ka mmekpa ahụ na mbibi gị belata ọ gwụla ma ị bụ ọkachamara triathlete.
N'okwu a, ị bụ ọdịdị nke ọdịdị, ị na-agbanwe agbanwe, ị dị ike karị, ịnwere ike iwepụ ya. Maka anyị nkịtị, anyị chọrọ ọfụma mara mma. Thingsfọdụ ihe ga-adịkwa iche bụ ihe ndị dị ka oche na-anọ.
Nwere ike ịhụ na na igwe ịgba ọsọ, na-agba okirikiri nke obere mkpịsị aka. Na-anya ụgbọ ala ọtụtụ awa ma ịchọrọ mgbaghara karịa na azụ ka ike gwụ gị ịnọdụ ọdụ n’oche ahụ. N'ihe banyere tribike, ọ dị ka mma.
Ọ sara mbara, ọ kpara ike. Ihe ị na - eme bụ ịgbatị ogologo ogologo ị chọghị mgbaghara dị ka oke mgbaghara. N'ihi na ị na-na-a bit ọzọ na-achịkwa ndapụta.
Mee posts na tri -Bike ha na-adịkarị ogologo ma na-adị gịrịgịrị iji mee ka ha dị elu, ebe oche dị n'okporo ụzọ n'okporo ụzọ, chaị, n'ọnọdụ a ha dị ogologo ma dị gịrịgịrị mana ha na-adịkarị gburugburu. Ihe ndị ọzọ nke ụbọchị ndị a na-abụkarị ndị ọzọ na tribike Ndị na-adịghị adị na ụdị ihe atụ a bụ mpaghara na-edozi ahụ gbadaa ebe a n'ime ụlọ, ma ọ bụ na ha nwere igbe nri na-edozi ahụ n'azụ isi, zoro ezo site na ifufe. Ihe ndị a bụ ụfọdụ ọdịiche dị n’etiti okporo ụzọ na igwe kwụ otu ebe.
Nwere ike iji igwe kwụ otu ebe maka ụzọ? Eeh. Ọ bụghị mgbe ị na-agba ọsọ. Ọ bụghị ma ọ bụrụ na ị na-anya otu ndị na-anya oke iwe ma na-adị gara gara gara gara.
Nwere ike ịme triathlon n'okporo ụzọ n'okporo ụzọ site na ịpịa ihe ndị aeroba? Eeh. Mana ọbụnadị ma ị ga-anya ogologo ogologo. Emela ego ma ọ bụrụ na ị kwadebere.
Ọbụghị ma ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịsọ ọsọ ị nwere ike ịbụ. Ọ bụ ya mere ha niile ji dịrị n'ihi na ha ọkachamara na ụdị ụgbọ ala, okporo ụzọ ma ọ bụ triathlon nke emere ha. Ihe m ga akwado, ọ bụrụ na ịnwere igwe kwụ otu ebe, bido na ogwe osisi aero ma were ha rue mgbe ị ga-ejide n’aka na ị dị njikere itinye ego ole na ole na triathlon wee gaa n’okporo ụzọ gbagoro.
Nwere ike mgbe niile mkpa ọzọ anyịnya igwe. Gba ígwè bụ ihe kachasị mma. Ugbu a, aga m enye onyinye ego m na Alter Ego. (egwu siri ike) Nke ahụ bụ ihe ọchị, enwere m ọnụ ala.
Naanị hoses abụọ. Ọ dị mma ịga ije na-ekwu maka igwe kwụ otu ebe, ịgba ịnyịnya ígwè, ịnọ na igwe kwụ otu ebe, ịnọ gburugburu igwe kwụ otu ebe, ịzụrụ ngwaahịa igwe kwụ otu ebe na ịghara ịgbụpụ ọnụ mmiri ụwa na ihu gị, ọ bụ kemgbe ụnyaahụ mgbe m hapụrụ ọfịs ka ị na-agba ịnyịnya n'akụkụ Noa. ụgbọ. Ọ ga-abụ njem na-atọ ụtọ n'ụlọ.
Lelee ya. Nke ahụ ga-adị mma. Gị gaba? M na-agba ịnyịnya.
Izu mbụ nke ịgba ịnyịnya ígwè. - Mama, bia kuru m. Izu mbụ nke ịgba ịnyịnya ígwè, ọ dị mma.
Ee, ngụkọta ụra na ihu. N’ututu a, m soro ndị otu ahụ riri, rie okporo ụzọ Headingley ma were obere iberibe ezé m pụọ mgbe m lọtara. Onye agbata obi. (ọchị) Maka niile OGs nke dịrị kemgbe afọ.
You na-echeta Ọsọ Nri? Nke a bụ otú triathlon Taren si malite. Ọ bụrụ na ị ga - azụta akụkụ ikpeazụ nke triathlon, anyị ga - akwado gị ka ị nye LBS mpaghara gị aka aka, ma ọ dịkarịa ala ntakịrị, anaghị m azụ ihe niile site na Alter Ego, mana m na - azụta ọtụtụ akụkụ igwe kwụ otu ebe , a na-arụzi ihe ọ bụla n'ebe ahụ. Tupu a izu ole na ole si ọrụ m zụtara Mel a COMMUTER igwe kwụ otu ebe n'ihi na m na-amasị ahụ ike, Na-amasị m anyịnya igwe, M na-amasị alter ego.
Achọrọ m ịkwado ihe ndị ahụ niile, igwe kwụ otu ebe dịkwa mma. Bikes bụ ntakịrị ụgbọ ala na mgbe ị banyere igwe kwụ otu ebe dị elu, a na-etinye ọtụtụ ọrụ n'ime idozi na ịkpụzi igwe kwụ otu ebe. na ị nweghị ike ime ya n'onwe gị n'ihi na ịnweghị ngwaọrụ pụrụ iche iji rụọ ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe gị ruo ọtụtụ afọ ma ị nyeghị ha azụmaahịa, ana m ekwe gị nkwa na oge ga-abịa mgbe ị ga-achọ enyemaka na igwe kwụ otu ebe gị. mkpa na ị gaghị enwe ike ịnakọta ụfọdụ ihu ọma.
Chọta ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe nke dị gị mma ma kwado ha ebe ọ bụla ị nwere ike. Zụrụ akụkụ nke ha. Zụrụ ihe mgbakwunye na-edozi ahụ na ha.
Kwe ka ha rụzie gị. Bido vlog na ndị na - eso ụzọ n'ụwa niile wee kwalite ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe na Vlog. Ihe dị mfe.
M ga-emeghe ụfọdụ ochie, kubie ume mail maka A Race Nutrition. (Ọchị) Mgbe e mesịrị, Traniacs.
Cervelo na-eme e igwe kwụ otu ebe?
B.-BikesOkporo ụzọ Colnagoanyịnya igwe, Trek, Santa Cruz naCervelo.
Cervelo bụ ezigbo akaraahịa?
Cervelobụ otu n'ime ihe ndị kasị ugwuụdịna ịgba ígwè, ya na ọtụtụ igwe kwụ otu ụzọ R, S-series aero-road bikes na P-series triathlon igwe kwụ otu ebe niile ejiri na ọkwa kachasị elu na ịgba ígwè ọkachamara na triathlon.
Cervelo S3 ọ dị mma maka ịrịgo?
The n'ozuzu ibu na-abata play obere na ekele na3rịgo S3na-enwe ọganihu mana ọ bụ n'ezie na ọ naghị emebiga ihe ókè ma e jiri ya tụnyere igwe ndị ọzọ na-arụ ọrụ ụgbọelu. Nọdụ ala na sadulu ma debe ike ya bụ ụzọ kachasị mma iji nweta yaS3 ịrịngwa ngwa.Mar 14 2020
Cervelo bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
Cervelobụ otu n'ime ihe ndị kasị ugwuụdịn'imeịgba ígwè, ya nso nke R-usoro n'okporo ụzọ anyịnya igwe, S-usoro aero-ụzọ anyịnya igwe na P-usoro triathlon anyịnya igwe niile eji na ọkwa kachasị elu na ọkachamaraịgba ígwèna triathlon.
Kedu ka igwe ịnyịnya Cervelo si dị mma?
Usoro Ranyịnya igwe-eme ka ihe magburu onwe ikpo okwu n'ihi na ọtụtụ ndị na-anụ ọkụ na-atụrụ ndụ na-agba ịnyịnya ka ha na-eme ihe niile ezinke ọma- nzaghachi nke onye na-agagharị agagharị, nke na-ekwenye ekwenye ma na-eji ire ụtọ, ezigbo isi triangle torsional siri ike, geometry vasatail nke dabara ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnyanke ọma, obere eku ibu namma...
Gịnị mere cervelo ji dị oke ọnụ?
Emere Cervelo na China?
Nke Cervelobụ ụlọ ọrụ Canada nke na-eme igwe kwụ otu ebe haChinama ọtụtụ ndị na-azụ ahịa kwenyere na ha bụ ụlọ ọrụ Europe nke na-eme igwe kwụ otu ebe na Europe.15 nke 2007 afọ
Ego ole ka igwe igwe Cervelo R5 dị?
Nke a na-agụnye wiil dị iche iche, ndụdụ, na akụkụ etiti iji jikwaa ihe diski diski chọrọ. Nke a na-agbakwunye ụfọdụ ibu na igwe kwụ otu ebe; gburugburu ole na ole narị grams. Dịka e kwuru, ụdị abụọ ahụ sitere na Cervelo - R5 na R5d - biara dị iche iche.
Kedu nke siri ike ịnyịnya igwe Cervelo siri ike ịzụta?
N'ezie, ụdị diski nke R5 bụ usoro igwe kwụ otu ebe kachasị sie ike. Nlekọta anya nke R5 na-agbasi ike na ịdị arọ na-ebute igwe kwụ otu ebe nke na-agba ọsọ ọsọ ọsọ mana ọ na-akwụsi ike ma na-ebu amụma na ọsọ. Cervélo's Pro Fit na-enye ebe dịkarịsịrị ala dị elu iji mee ka ọnọdụ ịnya ụgbọ elu dị elu.
Kedu ụdị wiil wiil rim breeki Cervelo R5 nwere?
Rim brek mbipute na-abịa na SRAM eTap na Zip 302 wiil, na Disc version nwere Electronic Dura Ace Di2 na Enve 3.4 wiil. Maka nzube nke nyocha a, Otú ọ dị, ọ ga-amasị m ilekwasị anya na etiti. N'ihi na ọ bụ n'ikpeazụ eku na-ekewa n'ezie otu agbụrụ anyịnya igwe na-esote.